April 2021 - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com April 2021 - खबर प्रवाह
शताब्दियौंदेखि महको प्रयोग महत्त्वपूर्ण औषधिका रूपमा भइरहेको छ । यसको सेवनले स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या निर्मूल पार्छ । सुन्दरता बढाउन समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । महका फ्याट, कोलेस्ट्रोल र सोडियम हुनाले यसले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ । यसमा एन्टीसेप्टिक, एन्टीबायोटिक, भिटामिन बी१ र बी६ भरपूर मात्रा हुन्छ । स्वास्थ्य र सुन्दरता दुवैका लागि लाभदायक हुन्छ । जाडोमा […]
भरतपुर : भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालले सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले हटाए पनि भरतपुरलाई स्मार्टसिटी बनाइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। मेयर दाहालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् । उनले आज भन्दा ३ वर्षअघि देखिनै देशका १२ वटा सिटीहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सोचका साथ देशका ६ महानगर मध्य भरतपुर महानगरपालिका एउटा र अरू बिभिन्न पालिकासहित १२ […]
गायक प्रकाश सपुतको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ । उनले, सामाजिक संजालबाट यो कुराको जानकारी गराउँदै आफू होम आइसोलेसनमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले, आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई पीसीआएर टेष्ट गराउनका लागि आग्रह पनि गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘एकदमै धेरै शरीर दुख्ने, गल्ने, छटपटी हुने, टाउको भारी हुने, घरीघरी श्वास बढ्ने र केही […]
काठमाडौं । लगातार कम्प्युटरमा काम गर्ने वा एउटै पोजिसनमा बसेर काम गर्ने हाम्रो बानीले शरीरलाई नोक्सानी पु–याउँछ । यसको सबभन्दा धेरै असर गर्दनमा पर्छ । हामीले दिनमा जम्मा एकदुईचोटि गर्दन घुमाउँछौं होला । अनि त गर्दन दुख्ने र अनेकथरी रोग लाग्ने त भइहाल्छ नि । हामी गर्दनको पीडा निको गर्ने केही योगासनहरूको चर्चा गर्दैछौं । बालासन […]
काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सभ्य राजनीतिमा कल्पना पनि गर्न नसकिने तरिकाले सत्ता जोगाउने र फाल्ने घृणित खेलहरू जारी रहेको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत डा. आचार्यले मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमण रोगबाट संक्रमित रहेको अवस्थामा गरिब, असहाय, शक्तिविहीनहरु अस्पतालको पहुँचबाट बञ्चित रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा जनताको […]
खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापालाई कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । बिहीबार स्वाब परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पुष्टि भएको हो । यसअघि ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनमा संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । कोरोना पोजेटिभ देखिएपनि स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको मन्त्री थापाले बताए । ‘हिजो जाँच गर्दा पोजेटिभ […]
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर–६ गैरीबारीमा तास खेल्दै गरेका १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्थानिय अमर बहादुर खत्रीको घरमा तास खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर र प्रहरी चौकी खोले सिमलबाट खटिएको प्रहरी टोलीले १० जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका व्यक्तिबाट प्रहरीले एक बुक तास सहित […]
चितवन : यतिबेला सिंगो देश नै कोरोनाको महामारीमा पिल्सिएको छ । देशकै मध्येभागमा रहेका कारण चितवनको भरतपुरमा पनि कोरोनाको संक्रमण दर उच्च रहेको छ । यतिखेर भरतपुर महानगर एकातिर कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको लागि लडिरहेको छ भने अर्कोतिर दर्जनौँ गौरवका आयोजनाहरुलाई पनि समयमै सक्न धमाधम काम अगाडि बढाइरहेको छ । ‘भरतपुर महानगरपालिका एकातिर कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको छ, […]
आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७८ वैशाख १७ गते शुक्रवार तदनुसार ई. सं. २०२१ अप्रिल ३० तारिख, राक्षस नामक संवत्सर, शाके :– १९४३, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (चौलागा), काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:२७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:३६ बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:३२ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:४२ […]
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले मुद्दा चलाएको र अहिले आएर ओली नेतृत्वकै सरकारले फिर्ता लिएर गल्ती स्वीकार गरेको […]
स’श’स्त्र प्रहरीको इ’न्सपेक्टर प्रह#री नि;:रीक्षक पदमा एक म’धेसी महिलाले नाम निकाल्न सफल भएकी छिन् । इ;न्स:पेक्टरमा नाम निकाल्न सफल विजयनगर गाउँपालिका ७, कपिलवस्तुकी प्रतिभा पाल एकाएक चर्चामा आएकी हुन् । स:श’स्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले प्रकाशित गरेको नतिजामा महिलारखुल्ला समूहतर्फ प्रतिभा पाल दोस्रो नम्बरमा नाम निकालेको देखिन्छ । विभिन्न निकायमा मधेसीमाथि भइरहेको विभेदका बाबजुद उनी […]
नवलपरासी। नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नक्कली एमाले भएको बताएका छन्। आफू पक्षीय कार्यकर्ता भेलामा नेपालले केपी ओली नक्कली एमालेको अध्यक्ष भएको आरोप लगाएका हुन्। सक्कली एमाले आफूहरू रहेको उनको दाबी छ। ओलीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने उनले बताए। नेपालले भने, ‘सक्कली एमाले हामी हौं, केपी ओली नक्कली एमालेका अध्यक्ष […]
काठमाडौँ । गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङलाई मातृ शोक परेको छ । उनकी आमा रुपा तामाङको दार्जिलिङको एक अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो । तामाङले आमाको निधन भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका हुन् । ‘एउटी आमा गुमाउनु भनेको एक क्षणमा हुँदैन, जे भयो त्यसको प्रभावलाई बुझ्न वर्षौं लाग्छ । हार्दिक श्रद्धाञ्जली मेरो सबैभन्दा प्यारो […]